Netherlands: Waxaa La Hirgaliyay App Soo Yareynaya Waqtiga Sugidda Gurmadka Deg dega – fogaanarag
Caafimaadka / Wararka / Wararka Holland | By Jama
Netherlands: Waxaa La Hirgaliyay App Soo Yareynaya Waqtiga Sugidda Gurmadka Deg dega
Waaxda Gurmadka Deg dega ee Netherlands ayaa sameeyay app loogu gudbin karo qaylodhaanta la xiriirta shilalka dabka iyo halisaha Caafimaad ee dadka la soo gudboonaada sida uu baahiyay Tv ga NOS.
App kaan oo loogu magac daray SOS Alarm App ayaa qaylodhaantaada u gudbinaya shaqaalaha gargaarka ee shaqada ku jira iyo sidoo kale kuwa aanan shaqada ku jirin ee ka ag dhow goobta ay wax ka dhaceen ama ay kuugu soo wajahdo halis caafimaad oo u baahan in si deg deg ah lagaaga so gaaro.
Waxaa sidoo kale waxaa qaylodhaantaada ay u dhaceysaa dhamaan dadka bartay gargaarka deg dega ee u diiwaan gashin in ay ku shaqeeyaan.
ku dhawaad 32,000 oo qof ayaa aqbalay in ay gacan ka gaystaan haddii xaalad deg deg ah ay ka dhacdo meel u jirta hal kilo mitir sida lagu sheegay warka, App kaan gargaarka deg dega ah ayaa rajaynaya in helo 100,000 oo qof oo mutatawiciin ah dhamaadka sanadkaan.
SOS Alarm App ayaa si islamarkiiba ah u soo gudbinaya goobta uu joogo qofka taabta iyo dhamaan wax kasta oo cadeyn ah oo uu soo diro sida sawirro iyo waxyaabe kale waxaana isla markiiba uu ka dhacayaa xafiiska heeganka ee gargaarkla deg dega ugu soo gudbinaya shaqaalaha gargaarka deg dega kuwa shaqada ku jira, kuwa aanan, kuwa fasaxa ah iyo dhamaan mutatawiciinta aqbalay in ay ka qeyb qaataan gaae ahaan kuwa u dhow halka ay wax ka dhaceen.
App kaan ayaa ka mid ah App ka lagu soo dajiyo Teleefoonada Gacanta ee halkaasi laga isticmaalo waxaana taabanaysaa barta qayladhaanta deg dega oo islamarkiiba fariintaada u gudbinayso dhamaan waaxaxa iyo shaqsiyaadka ku shaqada leh oo si deg deg ah kugu soo gurmanaya.
Waaxdaan ayaa rajaynaysa in App kaan uu yareyn doono waqtiga lagu gaaro goobaha ay wax ka dhacaan waayo waxaa la heli karaa dad aanan ka fogeyn ama dhinac socda meelaha ay wax ka dhacaan oo si deg deg ah ugu jawaabi karo waxa dhaca.